မော်လမြိုင်လေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၆ မီတာ / ၅၂ ပေ
16°26′41.09″N 97°39′38.41″E﻿ / ﻿16.4447472°N 97.6606694°E﻿ / 16.4447472; 97.6606694ကိုဩဒိနိတ်: 16°26′41.09″N 97°39′38.41″E﻿ / ﻿16.4447472°N 97.6606694°E﻿ / 16.4447472; 97.6606694
04/22 1,603 5,260 နိုင်လွန်ကတ္တရာ
မော်လမြိုင်လေဆိပ် သည် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ လေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၃ လေကြောင်းလိုင်းနှင့် ဆိုက်ရောက်ရာများ
မော်လမြိုင်လေဆိပ်ကို ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဗြိတိသျှတော်ဝင်လေတပ်ကွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ဗြိတိသျှတို့သာမက အမေရိကန် လေသရဲအဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကျားပျံ(Flying Tigers) တို့လည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အရှေ့တောင်အာရှ၏ အဓိကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးအဖြစ် ဂျပန်တို့သည် တိုက်လေယာဉ် ၆၅ စင်းဖြင့် မော်လမြိုင်လေယာဉ်ကွင်းနှင့် မုဒုံရှိ ၎င်း၏ဆက်သွယ်ရေးစခန်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အိုဘာတာသည် မော်လမြိုင် လေယာဉ်ကွင်းကို လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ဂျပန် ဆောက်လုပ်ရေး ပညာရှင် ၄၅၀ ဖြင့် မော်လမြိုင်လေယာဉ်ကွင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်လေတပ်ဌာနချုပ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း (Union of Burma Airways) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မော်လမြိုင် လေဆိပ် အပါအဝင် ပြည်တွင်းလေဆိပ်များသို့ ပြည်တွင်း ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ် XY-ABO ၏ De Havilland DH.104 Dove 1 သည် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ မော်လမြိုင်လေဆိပ်သို့ ပျံသန်းစဉ် မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့၌ ပျက်ကျခဲ့သည်။ ခရီးသည် ကိုးဦးနှင့် အမှုထမ်း နှစ်ဦး (လေယာဉ်မှူး ကပ္ပတိန် P.H. Sparrow နှင့် ရေဒီယိုအရာရှိ L.A. Stephens) တို့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ မြန်မာ့လေကြောင်းသမိုင်းတွင် ပထမဆုံးသော အရပ်သား လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း Nok Air Mini သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်သော ထိုင်းနယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် မဲဆောက်နှင့် မော်လမြိုင်ကြား ပျံသန်းမှု စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များကို မော်လမြိုင်လေဆိပ်မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုင်းNok Air Mini သည် ပြေးလမ်းနှင့် အဆောက်အဦများ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်လေဆိပ်၏ ပြေးလမ်းအား ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျက်နှစ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ ပြေးလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် စုစုပေါင်းကျပ် ၁၁၄ သန်း သုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။
မန်းရတနာပုံ လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန် Domestic
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန် Domestic
Mawlamyine Airport Archived 13 October 2014 at the Wayback Machine.
↑ Hammel, Eric (2010). Aces Against Japan II: The American Aces Speak. Pacifica Military History. pp. 63–68
↑ Ford, Daniel. Tales of the Flying Tigers. Warbird Books. ISBN 9781530249930
↑ Ford, Daniel (2014). Rising Sun Over Burma: Flying Tigers and Wild Eagles, 1941-1942 - How Japan Remembers the Battle. Lulu Press, Inc
↑ Ranter, Harro. "ASN Aircraft accident 14-MAR-1949 de Havilland DH.104 Dove 1 XY-ABO
↑ Nok Air's starts Mae Sot-Mawlamyine flights - The Nation
ဤ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေဆိပ်တစ်ခု ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်လမြိုင်လေဆိပ်&oldid=738541" မှ ရယူရန်
အာရှရှိ လေဆိပ် ဆောင်းပါးတိုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၆:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။